आँखा दिएर संसार देखाएका युवकलाई प्रेमीकाले घात गरेपछि....?
काठमाडौं । भदौ ११ । दुर्घटनामा परी आँखा गुमाएकी प्रेमिकालाई आँखा दान गरेर पुनरर्जिवन दिएका प्रेमिलाईनै घात पारेर प्रेमिका अन्तै लागिन भने के हुन्छ ? प्रेमिकालाई आँखा दिएर दृष्टीबिहीन बनेका प्रेमीलाई अँध्यारो संसारमा एक्लै छाडेर नयाँ जिन्दगी जिउने प्रेमिकाको बारेमा एउटा मार्मिक घटना घायल चरीमार्फत सार्वजनीक भएको छ ।
यस्तो छ सार्वजनीक भएको घटना
एउटा फोटोग्राफर, जसको क्यामरामा अचानक सुन्दर केटीको तस्विर कैद हुन्छ । यही घटनाले फोटोग्राफर र केटीबिचमा प्रेम मौलाउँछ । अनि सुरु हुन्छ मायाको संसार । अर्को अप्रत्यासित घटना घट्छ । कार दुर्घटनामा केटी गम्भीर घाइते हुन्छे । उनको आखाँमा ठूलो चोट लाग्छ । प्रेमी फोटोग्राफरले आँखा दान गरेर प्रेमिकालाई संसार हेर्न सक्ने बनाउँछन्, आफु दृष्टिविहिन बनेर । उपचारपछि केटीले प्रेमी भेट्दिनन्, अझ रोचक त आफुलाई आफ्नै प्रेमीले आँखा दान गरेको भन्ने नै केटीलाई थाहा हुँदैनन् । यसैबिचमा अर्का युवक केटीको जीवनमा प्रवेश गर्छन् । जो गीतका गायक हुन् ।
अत्यन्त मार्मीक कथाबस्तुबाट तयार गरिएको घायल चरी नामको म्युजीक भिडीयो मार्फत प्रेमको संसारमा डुवेर सर्वस्व गुमाउनेलाई पाठ सिकाएको छ । घायल चरी गीति घटनालाई गीतमा सुन्दर आवाज दिइएको छ भने म्युजिक भिडियो पनि मिहिनेतका साथ बनाइएको छ । यो सञ्चारकर्मी पवन भट्टराई र सञ्चिता शाही मोडल, विकास संगम राईको स्वरमा सजियोको आधुनिक गितको कथा हो । मुलधारको पत्रकारितामा लामो समयदेखि सक्रिय भट्टराईले म्यूजिक भिडियोमार्फत आफ्नो रंगमञ्चको यात्रा प्रारम्भ गरेका हुन ।
भट्टराईले विकास संगम राईको रचना र स्वरमा रेकर्ड भएको गित घायल चरी एल्बमको टाईटल गितको म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेर आफ्नो रंगमञ्चको यात्रा सुरु गरेका हुन । साजन राईको संगित रहेको सो म्यूजिक भिडियो निकै नै राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दर्शकबाट आइरहेको छ । आधा दर्जन म्यूजिक भिडियोको सफल निर्देशन गरिसकेका चर्चित निर्देशक आकाश उखेडाले निर्देशन गरेको सो म्यूजिक भिडियोमा निःस्वार्थ मायामा रहेका एक युवकले आफ्नी प्रेमिकाको उज्वल जीवनको लागि आफ्नो आँखा दान गरेपनि प्रेमिकाले प्रेमको महत्व नबुझेको भाव दर्शाईएको छ । सो गित हालै बुढासुब्बा डिजिटल प्रालीको यूट्यूब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको छ । खोटाङगे गायक राई र खोटाङगे सञ्चारकर्मी एवम नव मोडल भट्टराई लगायतका नयाँ टिम नथ्थीबाली बोलको गित मार्फत पुनः दर्शक माँझ आउने तयारीमा छन् ।
घायल चरी म्युजिक भिडीयो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस